This show presents interesting daily news inarelaxed style. This program helps audiences consume and understand what's happening in the news even if they have not read the newspaper, as this show focuses on the content in each day newspapers.
04 ก.ย. 2558 | 657 Views
03 Sep 2015 | 600 views ရေဘေးသင့်ပြည်သူတွေကိုကူညီဖို့မြန်မာနိုင်ငံဆီကုန်သည်နှင့်ဆီလုပ်ငန်းရှင်များအသင်းအနေနဲ့အသင်းအ၀င်များကိုအစည်းအဝေးခေါ်ယူကာလှူဒါန်းမှုတွေပြုလုပ်ခဲ့ပြီးပါဝင် လှူဒါန်းတဲ့အလှူရှင်တွေကစက်တင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့ကဘုရင့်နောင်ကုန်စည်ဒိုင်မှာဂုဏ်ပြုလွှာများပေးအပ်ခဲ့ပါတယ်။မြန်မာ
03 Sep 2015 | 504 views မြန်မာတစ်နိုင်ငံလုံးရှိရထားလမ်းပိုင်းတွေကို ဂျပန်နိုင်ငံ JICA နဲ့ပူပေါင်းပြီးစီမံကိန်းသုံးခု နဲ့ပြုပြင်ဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့သိရပါတယ်။စီမံကိန်းသုံးခုရဲ့ပထမဆုံးလုပ်ငန်းစဉ်ဖြစ်တဲ့ရထားတွေကိုထိန်းချုပ်နိုင်မယ့်စနစ်ဖြစ်တဲ့ Operation Control Centre(OCC) ကို တော့ဥ
03 Sep 2015 | 638 views လူမှုဝန်ထမ်းကယ်ဆယ်ရေးနဲ့ပြန်လည်နေရာချထားရေးဝန်ကြီးဌာနအနေနဲ့ရန်ကုန် တိုင်းဒေသကြီးအတွင်းရှိအသက်(၁၀၀)နှစ်အထက်သက်ကြီးဘိုးဘွားများအားဂုဏ်ပြုချီး မြှင့်ပွဲကိုစက်တင်ဘာလ(၂)ရက်နေ့က ပိဋကတ်သုံးပုံနိကာယ်စာသင်တိုက်မှာကျင်းပခဲ့ပါ တယ်။အဆိုပါဂုဏ်ပြုချီးမြှင့်ပွဲမှာရန်ကုန
ပန်းချီဆရာ ဦးလွန်းကြွယ်ရေဘေးသင့်ပြည်သူများထံ ပန်းချီကားရောင်းရငွေများလှူဒါန်း
03 Sep 2015 | 608 views ပန်းချီဆရာဦးလွန်းကြွယ်အပါအ၀င်မိသားစုခြောက်ယောက်ရေးဆွဲထားတဲ့ပန်းချီကား တွေကိုပြပွဲပြုလုပ်ရောင်းချခဲ့ပြီးပန်းချီကားရောင်းရငွေအားလုံးကိုရေဘေးသင့်ပြည်သူ တွေကိုပြန်လည်လှူဒါန်းခဲ့တယ်လို့သိရပါတယ်။ပန်းချီဆရာဦးလွန်းကြွယ်အနေနဲ့ပန်းချီဆရာတွေစုပေါင်းပြုလုပ်တဲ့ပန်းခ
အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းများဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်း ရေးစက်တင်ဘာလအတွင်း Networking အဖွဲ့ ဖွဲ့စည်းသွားရန်ရှိ
02 Sep 2015 | 625 views အစားအသောက်၊ ဆေးဝါး၊ အလှကုန်နဲ့လူသုံးကုန်ပစ္စည်းတွေဘေးအန္တရာယ်ကင်းရှင်းဖို့ အလုပ်ရုံဆွေးနွေးပွဲကိုအစားသောက်နှင့်ဆေးဝါးကွပ်ကဲရေးဦးစီးဌာနက ဦးစီးကာကန် တော်ကြီးပဲလေ့စ်ဟိုတယ်မှာ သြဂုတ်(၃၀)၊ (၃၁)ရက်နေ့ (၂)တာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ဒီ ဆွေးနွေးပွဲကနေစက်တင်ဘာလအတွင်းအဖွဲ့အစည
23 Jul 2019 | 186 Views
23 Jul 2019 | 4,961 Views
23 Jul 2019 | 17,007 Views
23 Jul 2019 | 6,743 Views
02 Sep 2015 | 564 views ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီး၊ ရန်ကုန်အနောက်ပိုင်းခရိုင်၊ လှိုင်မြို့နယ်ရှိပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှု ရုံးခန်းကိုစက်တင်ဘာလ(၁)ရက်နေ့ကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါတယ်။ပြည်သူ့ဝန်ဆောင်မှုရုံးခန်းမှာ တော့ပြည်သူတွေနေနဲ့တေးသံသွင်းလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ခွင့်လျှောက်ထားခြင်း၊ ယာဉ်မျိုးအ စားလိုင်စင်လှေ
02 Sep 2015 | 610 views မြန်မာနိုင်ငံတစ်ဝန်းလုံးမှာ ဇွန် - ဇူလိုင်နဲ့ သြဂုတ်လတွေအတွင်းမုန်တိုင်းတိုက်ခတ်မှုနဲ့မိုး သည်းထန်စွာရွာသွန်းခဲ့မှုတွေကြောင့်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်အချို့မှာရေကြီးရေလျှံမှုတွေမြေပြိုမှုတွေစတဲ့သဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွားခဲ့ပါတယ်။အခုလိုသဘာဝဘေးအန္တရာယ်တွေဖြစ်ပွ
ကော့ကရိတ် - မြ၀တီအာရှလမ်းသစ်ဖွင့်လှစ်
01 Sep 2015 | 598 views မြန်မာ-ထိုင်းချစ်ကြည်ရေး ကော့ကရိတ် - သင်္ဃန်း ညီနောင်- မြ၀တီလမ်းလွှဲပြောင်းပေး အပ်ပွဲ ဖွဲ့ပွဲနဲ့ မြ၀တီ-မြန်မာ-ထိုင်းချစ်ကြည်ရေးတံတားအမှတ်(၂)ပန္နက်တင်အခမ်းနားကို သြဂုတ်လ(၃၀)ရက်နေ့ကပြုလုပ်ခဲ့လိုပြန်ကြားရေ၀န်ကြီးဌာနကသတင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။အခုဖွင့်လှစ်မှုနဲ့လွဲပြောင်
01 Sep 2015 | 559 views တိုင်းပြည်ပြင်ပမှာစစ်တပ်တိုက်ခိုက်မှုကိုခွင့်ပြုပေးမယ့်ဥပဒေမူကြမ်းတွေကိုအတည်မပြုရေးကိုသောင်းနဲ့ချီတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေဂျပန်လွှတ်တော်ရှေ့အဆောက်အအုံရှေ့မှာဆန္ဒပြခဲ့ ကြပါတယ်။ဒီမူကြမ်းတွေကိုဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ် ရှင်ဇိုအာဘေးကလွှတ်တော်ကိုတင်သွင်း တာဖြစ်ပြီးအခုလိုကန့်ကွက်မှ
01 Sep 2015 | 567 views မြန်မာနိုင်ငံလက်ရှိအချိန်အထိထိပြည်တွင်းပြည်ပက တရားဝင်မှတ်ပုံတင်ထားတဲ့ ကုမ္ပဏီ(ငါးသောင်း)ကျော်အထိရှိလာတယ်ဆိုပေမယ့်အာဆီယံဒေသတွင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင်အနည်းဆုံးအဆင့်မှာဘဲရှိနေဆဲဖြစ်တယ်လို့ မြန်မာနိုင်ငံရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကော် မရှင် MIC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်
(၂၀၁၄-၁၄)ဘဏ္ဍာနှစ်ကစပြီး အာဟာရ ရက်သတ္တပတ် ဖွံ့ဖြိုးရေး အတွက် ဘဏ္ဍာငွေ ၄ ဒသမ ၆ ဘီလျံကို သုံးစွဲပြီးဖြစ်
31 Aug 2015 | 530 views ကမ္ဘာမိခင်နို့တိုင်ကျွေးရေး ရက်သတ္တပတ်နဲ့ အာဟာရ ရက်သတ္တပတ် ဖွံ့ဖြိုးရေးလှုပ်ရှားမှု့အဖြစ် ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာန အနေနဲ့ (၂၀၁၃-၁၄)ဘဏ္ဍာနှစ်ကစပြီး ဘဏ္ဍာငွော ၄ ဒသမ ၆ ဘီလျံကို အာဟာရဆိုင်ရာ် ဆေးဝါးနဲ့ လုပ်ငန်းသုံးပစ္စည်းတွေ ဖြည့်တင်းပေးခဲ့ ပြီးဖြစ်တယ်လို့ ရန်ကင်းပညာရေးေ
ข่าวทั้งหมด 1926 ข่าว 161 หน้า